Skotisma: Serivisy handefasana carte postales amin'ny $ 1 tsirairay | Martech Zone
Skoto dia serivisy tsotra izay manao zavatra iray - mamela anao handefa karatra paositra 4 × 6, feno loko namboarinao. Manome ny anao eo alohany sy any aoriana ianao, manome ny lisitry ny adiresy (afaka manampy anao izahay manangana azy na afaka manao izany ianao), ary hanonta carte postale tsara tarehy izy ireo ary handefa izany any amin'ny isan'ny mpanjifanao na ny mpanjifanao. 1.00 $ avy.
Ahoana no fiasan'ny skoto
Manampia sary - Ampiasao ny maodelin'izy ireo na mampakatra JPG, PNG na PDF ary hanamarina izany ny sehatra misy azy ireo.
Ampidiro ny adiresy - Ampidiro ny rakitra CSV misy ny anarana sy ny adiresin'ireo mpandray ary izy ireo dia hanao pirinty ary handefa azy ireo na aiza na aiza any Etazonia.
Aloavy ary andefaso - Midira amin'ny carte de crédit-nao, jereo ny topy maso ny carte postales -o, dia halefany any amin'ny mpiara-miasa aminy ny baikonao mba hanonta sy handefa.
Satria manohy mijanona miaraka amin'ireo mailaka maro dia maro ny boaty inbox, dia miverina indray ny mailaka nentin-drazana. Mahazo mailaka zato sy roanjato zato isan'andro aho… saingy tsy dia mahazo mailaka mihoatra ny vitsivitsy fotsiny aho. Mahasoa ihany koa ny karatra paositra satria tsy misy tokony hosokafan'ilay mpandray - apetraho fotsiny ny hafatrao, ny famolavolana tsara tarehy, ary ny antso-to-hetsika mahery eo amin'ny karatrao.
Ary mazava ho azy, aza adino ny mametraka ny adiresy Internet, ny adiresy mailaka ary koa ny rohy sosialy. Ataovy mora ny hifandraisan'ny olona aminao!
Alefaso ny carte postaly anao voalohany!
Tags: mail mivantanaMailmailakacartes postalesScoutmandefa karatra paositra
Famerenam-bola: Ahoana ny fomba fiasan'ny Amazon Repricing sy ny faharetan'ny fotoana